China ifektri abakhiqizi I-Haofeng
i-aluminium enamaqabunga enamathiselwe esiliva
Okunamathiselwe okungama-aluminium esiliva okungamaqabunga
Ikhwalithi ephezulu entantayo ye-aluminium pigment yepende ye-aerosol spray
I-Aluminium isiliva unamathisele i-6um i-chrome plating effect i-aluminium isiliva yokunamathisela upende ilingisa i-electroplating non-floating PAHs yemvelo enobungane obumhlophe i-aluminium esiliva isinamathisela. I-Aluminium isiliva unamathisela umbala oyingqayizivele kakhulu, ongahlukaniswa ube uhlobo oluntantayo, uhlobo olungantanta, isiliva elenziwe nge-electrodeposited, isiliva elingisa elekthronikhi, ingane yesiliva, umama weparele esiliva, isiliva eliphakathi nendawo, isiliva elinamandla, njll. Lakhiwe yesakhiwo esibushelelezi nesincane kakhulu, esinamandla okumboza ngosayizi wezinhlayiyana ezincane, amandla wokufaka umbala oqinile nombala ocacile. Ihlanganisa ukuminyana nobumhlophe, futhi ingenza ukumbozwa komhlaba kukhiqize okuhle, okuthambile nesibuko njengomphumela wensimbi ebonakalayo. Ukucaciswa komkhiqizo: usayizi wezinhlayiyana (150-4500 mesh) ukusetshenziswa komkhiqizo: ukumboza, uyinki, izinto zokwakha, ubuciko, ukuphrinta, imboni yamaphepha, izinto zasendlini, amathoyizi, njll. Imiyalo yokusetshenziswa: i-aluminium isiliva unamathisele kuqala ngo-1/2 -1 Izikhathi eziphindwe kabili inani likapende kuphela, bese linyakaziswa ngejubane eliphansi lakha islurry njengokuhlakazeka okufanayo, bese lengeza kancane kancane esimweni sokuxuba ngaphandle kwe-resin, solvent, izithasiselo, njll. Gwema ukugaya ibhola noma isivinini esisheshayo gwema ukulimaza ukwakheka kwe-aluminium isiliva unama.
Izici zomkhiqizo: ukunamathisela isiliva, ukusabalalisa kalula, amandla wokumboza amahle kakhulu, ukusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezifanayo, indawo ebushelelezi nebuthakathaka, umphumela onamandla wensimbi nomphumela wombala we-angular, nokumelana nokushisa ne-asidi. Izinyathelo zokuqapha: i-aluminium isiliva yokunamathisela kufanele igcinwe kude nokukhanya kwelanga nemvula endaweni evaliwe, futhi igcinwe egumbini elomile (ngaphansi kwama-35℃). Sicela uyisebenzise ngokushesha okukhulu, futhi ngemuva kokuyisebenzisa, kufanele ivalwe ngokuphelele ukuvimbela i-volatilization yama-solvents kanye nezithasiselo; ukugwema ukumnyama ne-oxidation okubangelwa ukomiswa kwenhlaka.
1. Mbumbulu yesiliva yokulingisa uchungechunge: ukukhanya okuhle kakhulu, umqondo wensimbi namandla wokumboza.
2.I-Silver flash series: enomphumela ogqamile ogqamile nokukhanya okubucayi kwensimbi, isetshenziswa kakhulu kupende wezimoto, upende wesithuthuthu, upende webhayisikili nopende wezinga eliphezulu wezimboni.
3. Uchungechunge lwesiliva oluhle: ubumhlophe obuhle kakhulu, obumboza amandla nomphumela wensimbi.
4. Ukunamathisela kwe-aluminium ezintantayo: kunokukhanya okungcono kokukhanya okubonakalayo, ukukhanya kwe-infrared nokukhanya kwe-ultraviolet, futhi kunekhono eliphakeme lokulwa nokugqwala.
Isetshenziswa kabanzi ekuphrinteni umbala wokuphrinta, ukuphrinta nokudaya, ukuphrinta kwendwangu yesiliva, ukumboza, uyinki wopende, ukuphrinta, ukuphrinta kwesikrini, ukuphrinta nokudaya, ubuciko, ipulasitiki, i-silica gel, imboni yamaphepha, upende we-fluorocarbon, ipulasitiki, isikhumba nezinye izimboni.
izindaba ezidinga ukunakwa:
1.Angavezwa yilanga noma yimvula;
2. Izogcinwa egumbini elomile (ngaphansi kwama-35 ℃);
3. I-Aluminium pulp yesiliva izosabela nge-asidi, i-alkali ne-oxidant enamandla, ngakho-ke kufanele igcinwe yodwa;
4. Isikhathi sokugcina akufanele sibe side kakhulu. Ngemuva kokukhipha nokusebenzisa, kufanele ivalwe ngokuphelele ngokushesha ukuvimbela uketshezi;
5. Uma isikhathi sokugcina side kakhulu, sicela uhlole ngaphambi kokusebenzisa;
6. Uma usebenzisa, kufanele inyakaziswe kancane, ukugqugquzela okusheshayo kuzokonakalisa ukumbozwa kobuso bokunamathisela kwesiliva;
Yonke imikhiqizo igcwele isigubhu sensimbi esingu-25kg, esivumelana nokuthuthwa nokugcinwa.
Langaphambilini Intengo yokunamathisela ephezulu yesiliva ye-aluminium
Olandelayo: Ukunamathisela kwekhwalithi ephezulu entantayo ye-aluminium yezingubo zezimoto
I-Aluminium Isiliva Namathisela Namathisela Isiliva Esintantayo
Namathisela i-Aluminium Isiliva Namathisela
Namathisela i-Aluminium Esiliva Esiphezulu
Namathisela i-Aluminium Yesiliva Esinamanzi
I-aluminium entantayo enamathiselwe esiliva
Intengo yokunamathisela ephezulu yesiliva ye-aluminium
Aluminium Namathisela Pigment Powder, Paint Aluminium ...
Ikhwalithi ephezulu ye-aluminium entantayo ye-automo ...
Namathisela i-Aluminium Namathisela
Idolobhana laseZhangxi, zhangsanzhai, County Changyuan
Amathegi - Hot Products - Ibalazwe